स्मार्ट सिटी बनाउने सहरमा फोहरको डङ्गुर
प्रजग कोरियालाई सरसफाइको देश भनिन्छ। प्रजग कोरियाको सहर बस्तीमा जताततै सफा, स्वच्छ छ। ठाउँ–ठाउँमा फूलबारी र बगैंचाको व्यवस्था गरिएको छ। फोहर जहाँतहीं फाल्दैन। फालिएको फोहर निश्चित ठाउँमा हुन्छ। निश्चित समयमा निश्चित ठाउँमा फोहर फालिन्छ र निश्चित समयमा फोहर उठाइन्छ र ठाउँमा लगिन्छ। तर नेपालको राजधानी काठमाडौंमा बरोबर फोहरको थुप्रो हुन्छ। फोहर उठाउन नसकेर दुर्गन्धित हुन्छ। राजधानी काठमाडौं त अरू नपाहरूभन्दा धेरै सफा हुनुपर्थ्यो। संसारका मानिसहरू पहिले राजधानीमा पाइला टेक्छन्। राजधानी छिरेपछि अरू पुरातात्त्विक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको भ्रमण गर्छन् – विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरू
राजधानी देशकै केन्द्र हो। काठमाडौं मनपा सफा भयो भने राम्रो सन्देश र नराम्रो भयो भने नराम्रो सन्देश छर्छ। त्यस्तो सहर दुर्गन्धित हुनु, जताततै फोहरको थुप्रो हुनु या फोहर उठाउन नसक्नु मनपाको कमजोरी हो। स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याउने राजनीतिक दलका नेताहरूकै जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौंमा निर्वाचित भएका छन्। मनपाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम सहरबस्ती सफा राख्नु हो, सफा गर्नु हो। त्यस्तो ठाउँ फोहर थुप्रेर दुर्गन्धित भएको छ। फोहरको डङ्गुरले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याउने मनपाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई फोहरको डङ्गुरले जिस्क्याइरहेको छ।
ओखरपौवाका सिसडोलवासीहरूको माग के हो? माग किन पूरा भएन भन्ने प्रश्न बेलाबखत उठेकै हो। माग पूरा गर्न सहमति भएको हो भने किन पूरा नगर्ने ! पूरा गर्न नसकिने हो भने माग पूरा गर्छु भनेर झूटको खेती किन गर्ने? सिसडोलवासीहरूसँग भएको सहमति पूरा गर्न आनाकानी किन? माग पूरा हुँदैन भने सहमति किन? राजधानीको फोहर बेलाबखत निश्चित ठाउँमा फाल्ने काममा किन अवरोध भयो? राजनीतिक दलका नेताहरूको झूटको खेतीले गर्दा समस्या दोहोरिरहेको छ र राजधानी फोहर भइरहेको छ।